Ukukhetha yensimbi izinwele for izinwele Ehlala
Thina sifazane - izidalwa ongaqondakali, siba logic ezithile, ekhetheke kakhulu. Uma izinwele ezinde - badinga sika, uma iDemo - ukwanda. izinwele Smooth kuyadingeka ukoma futhi abacaphuni - qondanisa ... Futhi kusukela izitayela fashion okudinga olubushelelezi ekahle izinwele, kufanele silandele kubo. A Ehlala we gumbi - inqubo akuyona ezishibhile, ngaphandle kwekhanda kungase kudingeke ngesikhathi esisodwa. Banquma - ukuthenga izinwele nensimbi yokwensimbi izinwele Ehlala!
Kodwa angesabi kokuthenga akudingekile, ngoba abakwazi kuphela sicela kodwa ecasukile omkhulu futhi prnesti eziningi izinkinga. Konke kufanele wasondela ngokuhlakanipha! Namuhla kukhona tinhlobo letehlukene izinwele ploek - futhi eqondisa futhi curling. Kukhona ngisho kumadivayisi ukuthi sihlanganise kokubili, nokuningi.
Ukuze uthenge pravlno yensimbi izinwele ukuze uqondise izinwele, udinga ukwazi ukuthi kwenziwa isembozo. I elula kunazo futhi ezishibhile ezinsimbini - metal eqondisa amapuleti. Kodwa leli thuluzi ziyokonakalisa izinwele zakho uma ulisebenzisa izikhathi ezingaphezu kuka ezimbili noma ezintathu ngenyanga. ukuthenga esinjalo sinengqondo uma qondanisa izinwele zakho kuphela ezinye uhlobo ukugubha. Kodwa ngisho Kulokhu, kubalulekile emnothweni womuntu ongabazisayo. Kungazelelwe, izinwele bushelelezi ngakho abafana nawe unquma ukuya nabo ngaso sonke isikhathi? I enamathela metal bome izinwele, abenze ziyaqothuka futhi okuhlukene.
Izinwele yensimbi ukuqondisa izinwele nge enamathela Ceramic kuyabiza, kodwa uthola amathuba amabili okubulala izinwele. Ingasetshenziselwa izikhathi ezimbili noma ezintathu ngesonto (ngokuvamile hhayi Kunconywa nhlobo). Futhi Ceramic enamathela izinwele elungisa bushelelezi kangcono ngokwanele ukuba ubambe izimpande amathiphu - futhi silungele ngokuphelele bushelelezi Strand!
Kodwa iyona engcono kunazo namuhla ibhekwa njengempophoma tourmaline enamathela. Wenziwe crystal lulwimi eziyigugu itshe tourmaline. Futhi ngisho kakade wacabanga ngemabula bese enamathela sobumba. Esinemthombo ka tourmaline ngesikhathi Ukushisa kudedela ion negative aphulukisayo izinwele. Ukubumba ngifudumeza ngokushesha elungisa izinwele namatshe amhlophe amaningi edonsa ukushisa asalile. Ngakho, umphumela ongemuhle izinwele is kuyehla kube sezingeni eliphansi. Ngaphezu kwalokho, imidlalo yamuva izinwele straighteners ngisho revitalizes izinwele sibonga izakhiwo ezichazwe ngenhla.
Ngaphezu kwalokho, amathuluzi yesimanje, yakhelwe ukwenza izinwele zakho bushelelezi futhi ukulawuleka, babe ezahlukene lokushisa imibuso. Ungasetha degree of self-Ukushisa, kodwa namanje abayi wathumba ngokushesha ukubeka ukushisa kakhulu. Ngokuvamile, it kuklanyelwe qondanisa ezisontekile kakhulu noma obukhulu.
ezinsimbini abaningi babe amathiphu nezilandiso. Abakwazi kuphela qondanisa izinwele zakho, kodwa noHezekeli - ukwenza amagagasi amancane noma enkulu. Ngakho ukukhuluma, "ababili kwelinye".
Uma udinga izinwele eqondisa isikhathi eside, futhi wenze ngokwakho njalo kungekho Ithuba noma isifiso, kufanele uthintane salon, lapho ochwepheshe kuzokusiza.
Yiqiniso, ngaphambi kokuba ubhalise insimbi izinwele ukuqondisa izinwele, badinga sisebenzise Heat umphenyi okhethekile zokuzivikela. Kuvikela izinwele futhi Ehlala do more masinya.
inqubomgomo Intengo iyahlukahluka ruble 800 amadivayisi elula kuze ruble 3000. Ngempela, kusuke kukufanelekele ithatha isikhathi, ngakho akukhona nje ukuthi ama bushelelezi futhi iqonde kahle kodwa izinwele enempilo!
Angel Day Sergei: isiko iholide
Coconut Oil - Impilo nobuhle kuzo zonke iconsi
I sheathing engabizi ngaphakathi okugeza? Okulolongwa ngokuba okugeza. Izici obandayo
Ukuhlola kafushane imodeli "Toyota Alioni"
Dzhonatan Devis: Biography, discography, empilweni yakho